Nohitsakitsahin’ny Jentily i Jerosalema...
Alakamisy 26 nôvambra 2020 — Herinandro faha-34 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 21, 20-28 — Miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa efa akaiky ny fanavotana anareo.
Masindahy Jean Berchmans (Kintan'ny finoana) 26/11/2020 06:30
Nohitsakitsahin’ny Jentily i Jerosalema... (Tenin'ny Tompo) 26/11/2020 04:00
Masimbavy Catherine d'Alexandrie (Kintan'ny finoana) 25/11/2020 06:00
Ho halan’ny olona rehetra ianareo... (Tenin'ny Tompo) 25/11/2020 04:00
Masindahy André Dũng-Lạc sy ireo namany (Kintan'ny finoana) 24/11/2020 06:30
Tsy havela hisy vato mifanongoa (Tenin'ny Tompo) 24/11/2020 04:00
Ny tsara ho fantatra momba ny fanabeazana manoloana ny fanolalana (Ampela mihary) 23/11/2020 10:00
Masindahy Clément de Rome (Kintan'ny finoana) 23/11/2020 06:30
Nahita mpitondratena nanatitra farantsa kely roa Izy... (Tenin'ny Tompo) 23/11/2020 04:00
Masimbavy Cécile de Rome (Kintan'ny finoana) 22/11/2020 06:30
Ny vavaka sy ny fahanginana
Nosoratan'i Ravaojason Manitra Malalatiana
Lohahevitra : Vatsim-panahy
Naseho ny : 11 novambra 2019
Fahanginana, fihetsika iray sarotra tanterahina ho antsika olombelona nefa tena ilaina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha isika foana mantsy no miteny dia tsy handre izay ambaran'Andriamanitra.
2020-06-29 / 19:13:51 - Niampy 2 ny maty ka mitontaly 20 ankehitriny ny isan'ireo lavon'ny valanarerina covid-19 eto Madagasikara. Niampy 60 koa ireo tranga vaovao voatily ho mitondra ny tsimokaretina ary nitombo 24 ireo marary mafy anatin'ny fahasarotana na ny "forme grave". Ankoatra ireo, nisy 22 no sitrana vaovao. Miisa 2138 ireo voatily ho mitondra ny tsimokaretina, nanomboka ny 19 marsa hatramin'ny 28 jona. Efa sitrana ny 966 amin'ireo ary mbola manaraka fitsaboana ny 1152. Mitontaly 48 ireo anatin'ny fahasarotana. Miisa 21444 ny fitiliana rehetra vita tato nanomboka tamin'io 19 marsa io no mankaty.
2020-06-29 / 18:54:18 - Mitaky ny fandraisana fanapahan-kevitra haingana sy hentitra ary mazava momba ny seha-panabeazana eto amintsika ny tompon’andraikitry ny fampianarana katolika eto Madagasikara, Mompera Jules Ranaivoson, raha naneho hevitra taorian’ny resaka nataon’ny praiminisitra tamin’ny vahoaka Malagasy, ny alahady teo. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ny olan’ny fampianarana sy ny ho avin’ny zaza Malagasy ny DINEC.
2020-06-29 / 18:47:37 - Mitaky ny amoahan’ny fitondram-panjakana ny datin’ireo fanadinam-panjakana rehetra sy ny fandaminana mifanaraka amin’izany ny mpampianatra mivondrona ao amin’ny « Association des professeurs certifiés » eto Madagasikara. Mitaky ny hanendrena maika minisitry teknisiana sy mahalala ny olan’ny fampianarana ary vonona hanome hasina ny mpanabe koa izy ireo. Fitakiana izay nivoitra tamin’ny fivorian’izy ireo tamin’ny sabotsy teo izany.
2020-06-24 / 16:13:13 - Vehivavy 1 indray no matin'ny coronavirus raha ny tatitra avy amin'ny CCO androany alarobia 24 jona. Miisa 16 izany izao ireo tsy nahatohitra ka lavon'ny valanaretina. Niampy 63 ireo olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina. Nisy kosa ny sitrana miisa 47 ary miisa 8 ireo marary mafy anatin'ny fahasarotana ka tsaboina eny amin'ny hôpitaly Befelatanana ny 6 amin'ireo ary any Morafeno Toamasina ny 2. Momba ireo marary vaovao miisa 63 dia avy eto Antananarivo ny 38, avy any Moramanga ny 20 ary avy any Toamasina ny 3. Miisa 1 avy kosa ny voatily ho mitondra ny tsimokaretina tany Anosibe An'ala sy Mahajanga. Momba ireo sitrana vaovao miisa 47 indray dia any amin'ny faritra Atsinanana ny 25 ary eto Antananarivo ny 22.
2020-06-24 / 16:03:27 - Mitaky ny hametrahana ny filankevi-paritra sy ny lalàna mifehy ny faritra eto Madagasikara ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko TIM, voafidy tany Arivonimamo. Manjaka tokana, hoy izy, ny lehiben'ny faritra ankehitriny amin'ny famaritana ny ny tetikasa samihafa atao sy ny fitantanana ny vola hanatanterahana izany. Tsy misy ny tetibola omen'ny faritra mikasika ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny famatsiana ny tohana ara-pahasalamana, ho an'ny distrikan'Arivonimamo, hoy ny depiote Rodin Rakotomanjato.
2020-06-24 / 15:47:15 - Niverina niasa ireo mpanao gazety ao amin'ny gazety Ny Valo Soa Vaovao. tsy niova tamin'ny fotokevitra nijoroany hatramin'izay ny gazety, raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Efa 10 taona mahery izao no nisian'io gazety io izay nandalo fotoan-tsarotra, toa ny orinasa rehetra, noho ny hamehana ara-pahasalamana sy ny fihibohana. Voatery nitsahatra noho izany ny fanontàna ny gazety. Nanampy trotraka koa ny raharaham-pitsarana nanenjehana ny talen'ny famoahana Arphine Rahelisoa izay nitarika ny fampidirana am-ponja azy teny Antanimora.
2020-06-24 / 15:38:28 - Mikatona avokoa ny tsena rehetra ao Analakely sy ny manodidina nanomboka androany 24 jona hatramin'ny zoma 26 jona. Tapaka manomboka androany ihany koa ny lalana. Tsy azon'ny fiaran'olon-tsotra sy ny fiara fitaterana atao ny mivezivezy amin'ny araben'ny fahaleovantena sy ny manodidina. Nivoitra ireo tamin'ny filazana navoakan'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Miisa 3.000, tsiahivina, ny mpitandro filaminana hetsehina ho an'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, hiandraikitra izay filaminana izay mandritra ny fanamarihana ny fetim-pirenena.
2020-06-24 / 12:28:38 - Nitrangana haintrano goavana teny amin'ny faritra 67ha ny harivan'ny talata 23 jona. An-jatony ny trano kilan'ny afo ka trano hazo ny ankamaroan'izy ireo. Anarivony ireo tsy manan-kialofana vokatr'izany. Nanomboka tany amin'ny 4 ora tolakandro tany ho any ny afo, raha ny fitantaran'ireo nanatri-maso ary tsy voafehy tanteraka raha tsy tany ho any amin'ny 7 ora hariva. Tsy fantatra mazava ny niandohan'ny afo saingy tombanan'ny maro ho trano hazo iray no niandohan'izany. Efa misokatra ny fanadihadihana.
2020-06-23 / 17:35:54 - Miisa 84 ireo olona voatily vaovao ho mitondra ny tsimokaretina coronavirus raha ny tatitra nentin'ny mpitondra tenin'ny CCO androany 23 jona. Nitombo 40 ireo olona sitrana ary niampy 3 ireo marary anatin'ny fahasarotana ka lasa 11 izany ankehitriny. Tsaboina ao amin'ny hôpitalin'Andohatapenaka avokoa ireo "forme grave" 3 ireo. Mitontaly 1.724 ireo efa voatily ho mitondra ny tsimokaretina nanomboka ny 19 marsa hatramin'ny 22 jona. Efa sitrana ny 732 tamin'ireo ary 15 namoy ny ainy.
2020-06-23 / 17:29:33 - Manampy ireo laboratoara efa manao ny fitiliana coronavirus eto amintsika ny LA2M, laboratoara vao notokanana eny Androhibe. Niisa 543 ny fitiliana vita tamin'ireo laboratoara ireo ny alatsinainy 22 jona ka nahitana tranga vaovao 84 izany. Nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar (IPM) ny fitiliana 201 tamin'ireo ka nahitana tranga voamarina miisa 8 izany. Nahavita fitiliana 160 kosa ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux (CICM) ka ny 68 tamin'ireo no nahitana ny tsimokaretina. Miisa 182 ny fitiliana vitan'ny laboratoara vaovao LA2M ka nahitana olona voatily ho mitondra ny coronavirus miisa 8 izany.